हाम्राे पिपलबाेट » विश्वकपका लागि कुन देशको टिम कस्तो ? सबै देशले लगाए राष्ट्रिय टिमको टुंगो विश्वकपका लागि कुन देशको टिम कस्तो ? सबै देशले लगाए राष्ट्रिय टिमको टुंगो – हाम्राे पिपलबाेट
विश्वकपका लागि कुन देशको टिम कस्तो ? सबै देशले लगाए राष्ट्रिय टिमको टुंगो
जेठ ३१ बाट रसियामा हुने फिफा विश्वकप फुटबल प्रतियोगितामा भाग लिने सवै टिमले राष्ट्रिय टिमको टुंगो लगाएका छन्। प्रतियोगिता सुरु हुन ९ दिन बाँकी रहदा प्रतिस्पर्धा गर्ने सवै ३२ टिमले अन्तिम टिमको टुंगो लगाएका हुन्।
सवै टिमले २३ सदस्यीय टिम घोषणा गरेका छन्। सवै टिमका गरी कुल ७ सय ३६ खेलाडीले २१औं संस्करणको प्रतियोगितामा भाग लिँदै छन्। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेलमा आयोजक रसिया र साउदी अरेबियाबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। अन्तिम टिममा परेका सवै खेलाडीको एउटै सपना आफ्नो देशको जर्सी पहिरिएर मैदान उत्रने हुनेछ।
डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनीका ९ जना अघिल्लो विश्वकपको उपाधि जितेका खेलाडी छन्। सन् २०१४ मा ब्राजिलमा भएको विश्वकपको ट्रफि उचालेका ९ खेलाडीको लक्ष्य दोस्रो पटक उपाधि उचाल्नु हुनेछ। जर्मन टिममा १६ खेलाडी भने पहिलो पटक विश्वकप खेल्ने लक्ष्यमा हुनेछन्।